Nezvedu - Zhucheng Shenlong Machinery Factory
Zhucheng shenlong michini fekitori, iri muchangcheng maindasitiri paki, kumabvazuva kuQingdao huangdao, kumaodzanyemba kune rizhao, kuchamhembe kune weifang, kumadokero kune linyi, yakakosha nzvimbo yekufambisa nzvimbo mujiaodong, traffic iri nyore kwazvo uye yakagadzirwa.
Zhucheng shenlong michini fekitori yakavambwa muna 2004, kweanopfuura makore gumi anga achinamatira kuchinangwa chekuhwina nemhando yepamusoro, kugutsikana kwevatengi sechigadzirwa chemhando yepamusoro. Akateedzana ematanho anoshanda ehutano hwekusimbisa matanho akaomeswa kuitwa mukugadzirwa kwechigadzirwa, kugadzirwa uye kushandiswa kwevashandisi. Gadzira mushandisi mafaera, kupa vashandisi nehunyanzvi, nekukurumidza, yakanakisa mushure-yekutengesa sevhisi, kuona kuti vashandisi havana zvinovanetsa. Kune ruzhinji rwevashandisi kupa michina yemhando yepamusoro, kuitira kuti vashandisi vanetseke, chengetedza nguva, chengetedza kushanda nesimba, kuti vagadzire zvigadzirwa zvakaisvonaka, kuitira kuti chigadzirwa chine mukurumbira kwese kwese, kuzviuru zvemhuri, ndicho chinangwa chedu; Iri zvakare basa redu rekugadzirisa michina emakambani.
Zhucheng Shenlong Machinery Fekitori ndeimwe yevanogadzira hukuru hwekupisa kwakanyanya uye yakakwira presure retor uye yakapetwa ketera muChina. Isu tinonyanya kugadzira otomatiki emvura kunyudza kudzikisira, mvura pfapfaidzo / cascading kudzikisira, muhombe kudzora. uye jekete rakapfeka. Zvigadzirwa zvedu zvinokodzera maChinese nekune dzimwe nyika makambani uye ese marudzi ezvokudya nezvinwiwa vanogadzira. Kunze kwezvo, michina yedu inotengeswa munyika yese uye inotumirwa kuRussia, Maodzanyemba-kumabvazuva eAsiaancountries, nezvimwewo michina yedu inonyanya kushandiswa kune ese marudzi ezvokudya zvemumagaba, senge yakarongedzwa nyama nyama, zvigadzirwa zvemukaka, bhinzi. mazai. chinwiwa nezvimwe.
Shenlong Machinery Fekitori ine yakasarudzika sterilization tekinoroji uye akakwana mhando vimbiso system. Zvemakomputa otomatiki kudzora, isu tasvika kune epamberi epamusoro nhanho. Zvakare, yedu yekutonga system inogona kunyatso kutonga kumanikidza uye tembiricha panguva yekuita, uye kuratidza iyo yese maitiro uye kurekodha iyo tembiricha uye T-Tcurve. Kunze kwezvo, inogona kuchengetedza anopfuura zana kubereka maitiro ezvigadzirwa zvakasiyana. Zvakare isu tinokwanisa kugadzira yekuparadzira kupisa bvunzo uye nekupa sainzi hwaro hwekuongorora iyo yekudzivirira nzira.
Shenlong Machinery Fekitori yaigara yakanamatira kune yedu bhizinesi tenet ye "mhando yekurarama, kuvimbika kwekusimudzira, manejimendi kuita purofiti, kunotsigirwa nebasa", uye kunamatira kunheyo ye "Vanhu-vanotungamira, Vatengi samwari" .Saka, uchitarisira nemoyo wese kune kwako kubatana !!
Hunhu hwakakosha, sevhisi chivimbiso, bhizinesi rinotarisana nevanhu. Namatira kune "mhando yemhando yepamusoro, mhando yekukunda musika" kutenda, kuumbwa kweiyo yakakwana mhando vimbiso sisitimu uye mushure-yekutengesa sevhisi sisitimu, kupa vatengi basa rinogutsa mushure-rekutengesa basa rebasa, vanoda kune vamwe vekumba nevatorwa vagadziri uye vanhu vega kumisikidza huwandu hwakasiyana hwekudyidzana hukama.
Zhucheng shenlong michini fekitori inogamuchira nemutsa vatengi vekare uye vekare kuti vashanyire kutungamira, kutaurirana kwebhizinesi.
Shenlong sterilization pot (bhurocha)